HIM | Health in Myanmar » 2015 » August
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmarno comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, အမျိုးသား, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
သုက်ရည်အရောင်ဝါရောင် (လိမ်မော်ရောင်) ဖြစ်နေတာဆိုရင် အထဲမှာ ဘီလီရူဘင်ခေါ် အသားဝါရောဂါရှိနေသလား၊ သွေးနည်းနည်း ပါနေသလား၊ ဆီးနဲ့ရောနေသလား စစ်ရမယ်။ အစားအသောက်နဲ့ သက်အပေါ်မှာလည်း မူတည်တယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် အဖြူရောင်နဲ့ မီးခိုးရောင်ဖြစ်တယ်။ နောက်နေတယ်။ နည်းနည်းလေးတော့ဝါနိုင်တယ်။ တခါတလေမှာ အရောင်ပြောင်းတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။
Have black ribbons failed?
I guess this answers my question about the status of the black ribbon movement. Is the civil war within the Ministry of Health that led to the calving ofanew Ministry really about this issue? Jamie ++++++++++++++++++ Black ribbons fail to deter militarisation of health ministry Shwe Yee Saw Myint Monday, 31 August 2015 […]
The response to the HIV epidemic among people who inject drugs in Myanmar is failing
The response to the HIV epidemic among people who inject drugs in Myanmar is failing. You can see the evidence all through the Myanmar Global AIDS Response Progress Report 2015. http://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/publication/Myanmar_narrative_report_2015.pdf HIV prevalence in people who inject drugs in Myanmar is increasing. Prevalence is measured in places where services are delivered so true prevalence may […]
ပထမဆုံးအကြိမ် လွဲမှားသော လိင်ဆက်ဆံမှု မဖြစ်စေဖို့
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmarno comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, နည်းလမ်း, အမျိုးသမီး, အမျိုးသား
တကယ်လို့ လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းမှာ ၀မ်းဗိုက်ပိုင်း နာကျင်မှုကို ခံစားရမယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့ သားအိမ် နဲ့ မျိုးဥ အိမ်မှာ ရောဂါဝေဒနာ တခုခု ရှိနေတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန် သားဖွားမီးယပ်ကောလိပ် (ACOG) ရဲ့ အဆိုအရ ပထမဆုံးအကြိမ် လိင်ဆက်ဆံစဉ်မှာ ၀မ်းဗိုက်နာကျင်ခြင်းက သားအိမ်စောင်းခြင်း၊ မျိုးဥအိမ် အကျိတ်၊ ဆီးအိမ် ရောဂါ၊ သားအိမ်ရောဂါ ဒါမှမဟုတ် တင်ပါးဆုံ အတွင်း အင်္ဂါများ ရောင်ရမ်းတဲ့ရောဂါတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: နည်းလမ်း, ပညာပေး, အမျိုးသမီး
အမျိုးသမီးရဲ့ လိင်စိတ်ကုန်ခန်းမှု၊ လိင်ဆက်ဆံမှုပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ တစ်ခုခုကို စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းခြင်း၊ သာယာမှု မရှိခြင်း၊ စိတ်နိုးကြွမှုမရှိခြင်းတို့ ဟာ ခြောက်လထက် ပိုမိုကြာမြင့်နေမယ်ဆိုရင် Filbanserin ဆေးက ကုသမှု ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီဆေးက မထိရောက်သလို၊ လိင်စိတ်ကုန်ခန်းမှုကလည်း ဆက်လက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအချက်တွေထဲက တစ်ချက်က သင့်ရောဂါရဲ့အရင်းအမြစ်လားဆိုတာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်သင့်ပါတယ်။
Myanmar Global AIDS Response Progress Report 2015
The 2015 Myanmar Global AIDS Response Progress Report has been posted on the AIDS Data Hub site. You can download it at http://www.aidsdatahub.org/sites/default/files/publication/Myanmar_narrative_report_2015.pdf. It is also one of the few documents on the UNAIDS Myanmar site. http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/MMR_narrative_report_2015.pdf. The major failing of the national response to HIV in Myanmar is the failure to address the expanding […]
Warnings on cigarette packages
Tobacco package warnings with text and pictures is ONE of the measures that is effective to decrease tobacco consumption and improve health. Here is an evidence document on it: https://tinyurl.com/px8qylw. Didn’t Harry forbid tobacco advertising billboards when he was Minister of Health overadecade ago? There are many more evidence-informed actions that can be […]
Author: HimBur | Category: Myanmar, ဆောင်းပါးno comments | Tags: AIDS, HIV, အကူအညီ, ဆေးဝါး, ဖြူဖြူသင်း
ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းကား မာသာဖြူဖြူသင်းဟု ဆိုရလောက်အောင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီရောဂါသည်များကို မိခင်ရင်း တစ်ဦးသဖွယ် စောင့်ရှောက်ကျွေးမွေးနေသူဖြစ်သည်။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီရောဂါသည်ပေါင်း သုံးရာကျော်တို့သည် ကာကွယ်ဆေးထုတ်ရန် ရန်ကုန်သို့ လာကြရသည်။ ထိုဆေးကို ဟော်လန်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းပေးသည်။
Author: HimBur | Category: HIM, Myanmar, Q&Ano comments | Tags: HIV, နည်းလမ်း, လမင်းကို, အမျိုးသမီး
Public Toilet တွေမှာ HIV ပိုးက အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။ လူ့ကိုယ်ခန္ဒာက အရည်တွေဖြစ်တဲ့ သွေး၊ လင်အင်္ဂါရည်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှသာ HIV ပိုးက ကူးစက်နိုင်တာပါ။ HIV ပိုးက လူ့ကိုယ်ထဲမှာ ရှိနေခိုက်သာ အသက်ရှင်ပြီး လူ့ကိုယ်ပြင်ပ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထွက်လိုက်တာနဲ့ သက်မရှင်နိုင်တော့လို့ပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်မပူပါနဲ့။
Status of the black ribbon movement
What is the status of the black ribbon movement now? Jamie ++++++++++++++++++ Movement against army appointees in Burma’s health ministry vows to continue advocacy – Zarni Mann The Irrawaddy August 12 2015 A movement launched Monday against the appointment of military officers to positions within the Ministry of Health has responded cautiously to an apparent […]
Article on sex work
It is good to see the Irrawaddy and Myanmar Now publishing work on sex workers. I agree with Sid Naing that understanding sex work and listening to the voices of sex workers will put us all on the right path. Child labour, including sex work, is unacceptable. But focusing on children in sex work may […]